कोरोनाविरुद्धको सहयोगको बिषयमा फेरी आयो करिष्माको अर्को स्टाटस ! « sajhapage
कोरोनाविरुद्धको सहयोगको बिषयमा फेरी आयो करिष्माको अर्को स्टाटस !
प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७६, मंगलवार १५:४९
काठमाडौं, १८ चैत । सदाबहार नायिका करिष्मा मानन्धरले सामाजिक विषयमा बेला-बेलामा टिका टिप्पणी गरि राख्छिन् । यसै क्रममा कोरोनाको लडाइँका लागि भन्दै सरकारले खडा गरेको कोषमा कलाकारले सहयोग नदिएको भन्दै टिप्पणी र मिडियामा समाचार बन्न थालेपछि करिष्माले एक स्टाटस लेख्दै सहयोग गर्ने काम सरकारको भएको बताएकी थिइन् ।
उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘के सेलिब्रेटीले सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने? अनि के काम सरकारको ? किन भोट गरेको हामीले ? के हामी धुर्मुस, सुन्तली हौं कि रवि लामिछाने ? जानुस् तपाईंहरूको भगवानलाई खोज्नुस्, तर घर बस्नुस्,’ करिष्माले लेखेकी थिइन् ।
यद्यपी करिष्माले यो स्टाटस सामाजिक सञ्जालबाट हटाइसकेकी छिन् ।
हेर्नुहोस् उनको पछिल्लो स्टाटस जस्ताको त्यस्तै –